SADC : manome rariny ny fanitsahana ny zon’olombelona ? | Site officiel du collectif GTT Gasy Tia Tanindrazana
SADC : manome rariny ny fanitsahana ny zon’olombelona ?
Mihely amin’ny gazety mpomba ny fitondrana rehetra androany ny fanambarana iray nolazaina fa navoakan’ny « bureau de liaison » an’ny SADC eto Madagasikara. Ny mahagaga voalohany aloha dia tsy nahazo izany ireo gazety izay manohitra ny FATE ary tsy misy ny sonian’i Sandile Schalk mpandrindra ity rafitra ity ilay fanambarana. Ny laharan-tariby eo ambany izay voalaza fa azahoana mifandray amin’ny « bureau de liaison » dia tsy misy mandray intsony hatrin’ny maraina. Mbola vao eo amin’ny endrikendriny fotsiny izany dia efa mampanahy ny mombamomba ity fanambarana ity.
Raha ny voarakitra ao anatiny indray dia manameloka tanteraka ny fomba niverenan’i Lalao RAVALOMANANA teto Madagasikara tamin’ny zoma lasa teo ilay fanambarana ary sahy milaza mivantana fa ho saziana ny Filoha RAVALOMANANA noho izany zava-nitranga izany. Eo no tena mampanontany tena amin’ny fihetsiky ny SADC rahatoa ka avy amin’izy ireo tokoa ity fanambarana ity. Toa mankatoa ny fanitsakitsahana ny zon’olombelona afaka mivezivezy izy ireo ary manome vahana sy manome rariny ny FATE sy ny fihetsika mamoa fady nataon’izy ireo tamin’ny vadin’ny Filoha RAVALOMANANA sy ny vinantovaviny. Raha voamarina izany fa avy amin’ny SADC io fanambarana io dia ahiana tsy hamaha ny krizy ny asany fa hiteraka krizy vaovao nefa ny eo tsy mbola ahitam-bahaolana.
Tsy rariny …
Ho an’i Guy Maxime Ralaiseheno manokana dia tsy manan-jo haneho hevitra amin’ny fiverenan’ny tera-tany Malagasy eto an-tanindrazany ny SADC. Hita rahateo fa tsy nanam-pikasana ratsy ny vadin’ny Filoha RAVALOMANANA fa ny hitsidika ny reny niteraka azy izay efa voky taona sady tsy salama no anton-diany ary tapakila mandroso sy miverina no tany aminy.
Misy tsy nandray andraikitra
Misy antanan-tohatra maro eo amin’ny fitondrana lazaina fa iaraha-manana no tsy nanao ny asany tamin’iny raharaha teny Ivato ny zoma teo iny. Manomboka any amin’ny Praiministra izany. Raha ny nanaovana sonia ny tondro zotra no mbola toy izao ny vokany dia vao maika mampihemotra ny dingana rehetra efa vita ka hiteraka ahiahy amin’ny vahoaka Malagasy maro an’isa.